Aeroflot dia manampy fahita fahatelo amin'ny zotra Seychelles
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Russia » Aeroflot dia manampy fahita fahatelo amin'ny zotra Seychelles
Aeroflot dia nanambara tamin'ity herinandro ity ny faharetana tsy an-kiato vaovao avy any amin'ny foiben-toerany ao Mosko - Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Sheremetyevo - hatrany amin'ireo nosy Seychelles, nanomboka ny 1 Mey 2021.
Ny sidina mivantana mivantana mampifandray an'i Moskoa mankany amin'ny Nosy Mahe any Seychelles dia miverina aorian'ny fiatoana maharitra.
Ny serivisy dia hiasa eo anelanelan'ny toerana 2 amin'ny zoma, asabotsy ary alahady manomboka amin'ny volana ho avy.
17 taona lasa izay taorian'ny nametrahan'ny Aeroflot fitaovam-piantsonana tany amin'ny nosy Mahe any Seychelles.
Tonga ny vaovao roa herinandro taorian'ny niverenan'i Aeroflot voalohany tany amin'ireo nosy taorian'ny 17 taona tsy nahajanona azy.
Hanolotra sidina telo mivantana mampifandray an'i Moskoa sy ny Nosy Mahé izao ny kaompaniam-pitaterana. Ny zotra dia hiasa ny zoma, asabotsy ary alahady.
Tamin'ny fanambarana ny fandaharam-potoanan'ny sidina vaovao, ny Chief Chief Officer of Aeroflot, Anton Myagkov, dia naneho ny fientanam-pony tamin'ity fahita vaovao ity ho valin'ny fitakiana ny Seychelles eny an-tsena.